> Lacagta iyo dhaqaalaha > Deynta
Deynta badan ee la qaato waxay si gaar ah u saameysaa dad tiro badan oo de kasta leh ama heerkooda dhaqaale kala duwanyahay oo Swiiska degan. La xiriir xarumaha dadka kala taliya arimaha ku saabsan sida denta loo qaato iyo sida loo bixiyo
Xal la’aan ama talo xun
Ururada ganacsiga ee maamula bixinta deynta: iska ilaali in aad u gacangasho ururada ganacsiga oo dadka u soo bandhiga in ay deynbixiyaan, ku na baahiya warkooda joornaalada.
Waxad halis u tahay in lacag badani kaa dhunto adiga oo deyn ka buuxda oo aan tii hore weli iska bixin
Deynta loo qaato waxyaalaha aad adanaa isticmaasho : wakhti gaaban ayaad ku heli kartaa waxyaalo aad u baahneyd, laakiin la soco waxa kugu sii badanayaa deynty. Lacagaha deynta ah oo ay kuu soo jeediyaan heyadaha bixiya deymaha yar-yar, ma aha kuwo badanaa macquul ah oo la isku haleyn karo
Deynta loo qaato dhismo iyo wixii la xiriira
Deynta noocaas oo kale ah oo laga qaato bangiyada marka guri dhisaneysid ama wax la mid ah, ma bixineysid deynta lagu heshiiyay lagugu na leyahay oo keliya, waxa kale oo ku dul saarmaya qiimaha waxa lagu heshiiyay, dulsaarki bangiga, iyo qiimaha caymiska oo sareya. Intaas ka dib, haddii aad ka baxdo heshiiska la kala saxiixday inta aan xiligii heshiiska la gaarin, waxa ku dulfuulaya lacag badan oo dheeraad ah.
Kaartad Koontada : Haddii aad bangiga kala baxdo lacag ka badan hantidi kuu taalay, oo aad guduudiso koontadaada, waxa lagu saarayaa korsaar dhan 15%.
Kaartada macbiisha : kaartadaasu waxay kuu ogolaaneysaa in aad meel kasta lacag kala baxdid, ama wixi aad gadatay ku bixisid, lakiin waxa lagaa doonayaa in aad deynta ku bixisid isla bishaas aad qaadatay, waxa na lagu saarayaa korsocod. Taa waxa sii dheer, bangiyada oo leh wakiilo lacagta u qabta, kuwaasu na waxay ku saaranayaan dulsaar dheeraad ah.
Ka digtoonaada xafiisyada lacagtu ku dhacdo !
Badanaa ba shirkadaha iyo dukaamada waaweyni waxay wakiishaan xafiisyo soo aruuriya lacagta lala daaho, kuwaas oo u xil saaran in ay u la dhaqmaan arinkan si xadidan hadduu yahay mid sharciga waafaqsan ama mid aan waafaqsaneyn. La xiriir heyadaha dadka la taliya, haddii aad waraaq ka heshid xafiisyadaas oo ku saabsan lacag aan la bixin wakhtigeedi.
In this section: themen/geld/schulden/konkurs, Xaraashka alaabta, themen/geld/schulden/schuldensanierung, themen/geld/schulden/betreibung
Xarumaha Suisska jarmaka ee lagala tashado d4ymaha
Xarumaha Suisska afka Faransiiska ( Romande)
Warar dheeraad ah oo intaas ka baxsan doon
Caritas Schuldenberatung / Conseil dettes
Koontada bankiyada ama poostada
Mawduuca lacag amaahashada
Miisaaniyadda ama bajedka